Light simbi imba mhenyu
Steel mamiriro chivakwa
Pre simbi mamiriro yokuchengetera zvinhu
Metal Steel Structure Building Wekishopu
The JOIN hwokugadzira chikwata ane emakore Zvakaitika indasitiri, pamwe simba hwokugadzira uye nounyanzvi ruzivo. magadzirirwo kwedu unhu zvakaisvonaka uye mitemo anobvumira pakusika yepamusoro, mukuru-kushanda, akangwara michina.
JOIN yepamusoro zvigadzirwa, kugadzirwa mitemo, uye vatengi kunge yakasimbiswa nzvimbo yedu ive indasitiri mutungamiri. Kuti vave nechokwadi mureza uyu kuramba achisangana, mahofisi emapazi uye Distributors zvave sokuronga kuisa-up yose China.
Icho JOIN kuzvipira kwadzo vatengi kuti zvinoita kuti zvose pre uye mumhanyi-sale basa uye dzidzo zvichagoverwa kukubatsira kuziva uye kushandisa zvinhu zvedu nokukurumidza uye kwazvo.
Iri Qingdao, JOIN kuti okutengesa chikwata uye fekitari vanovimba ane Integrated Management hurongwa kuti rinopa zvose-kumativi mukushandira vatengi, kubva pre-sale kuti post-sero basa. The chikamu boka, Qing Dao JOIN Steel Structure Co., Ltd, anopa kutendeuka-chinokosha basa Steel chivako kugadzira nokuda maindasitiri kushandiswa, Agri-ukoshi zvivakwa, uye Pre-akagadzira dzimba dzakavanzika Estates. The hunoshamisa mainjiniya, riri Shanghai Headquarter muhofisi yedu, dzichengete azoshandiswa workshop uye kupa basa chijana-shanguriro vatengi vedu.
Steel Structure Building dzemusangano
Steel Prefab Chicken House In yehuku Farm
Synowie Talks: The Latest In yehuku Technolo ...
"Yehuku Industry Anogona Create 30.000 ...